Akụkọ - NewGene enwetala akwụkwọ ikike nnwale nke onwe nke COVID-19 na mba 6 ọzọ! Na mbụ merie European Ọkachamara Whitelist Grand Slam!
Na mbido Eprel, ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwuru na onye na-emepụta Hangzhou nke nchọpụta COVID-19 reagents-NEWGENE (Hangzhou) Bioengineering Company's NEWGENE brand COVID-19 antigen meriri ndị ọkachamara ọkachamara nke mba niile dị na Europe. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ mụtara na nnwale onwe nke German "ndepụta ọcha" na French nyocha nke onwe "ndepụta ọcha" nke akara NEWGENE ka akwadoro. Bụrụ onye nrụpụta ụlọ nke nwetala "whitelist" tozuru oke nke ụdị nyocha onwe onye nke European COVID-19 antigen test na mgbakwunye na CE, ahụ ahụ ọkwa. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ọkwa nke NEWGENE CE na-agbakwa nkwupụta ya. N'ihi njirimara ngwaahịa ya ka mma na iru eru mba dị elu, a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ọkwa CE ga-enyekwa ya ikike n'ọdịnihu dị nso.
N'ihi nbibi nke ụdị mmerụ ọhụụ, mba ndị dị na Europe dịka France, Germany, Italy, Hungary, Poland, na Czech Republic abanyekwala na mgbochi ọhụrụ, ọtụtụ mba Europe abanyekwala n'ọgba nke atọ nke ọrịa. A na-eji ngwaahịa ndị ọkachamara na ngwaahịa nnwale onwe ha n'ọtụtụ ebe na usoro ọgwụgwọ nke mba Europe, na-enyere usoro ahụike mpaghara aka iji lụso ọrịa ahụ ọgụ. N'otu oge ahụ, ozi IVD mụtara na Ngalaba Ahụike nke Malaysia anwalela ngwaahịa antigen nke NEWGENE maka mmiri mmiri na-amị miri emi na-enwe mmetụta nke 96%, na-eme ka ọ bụrụ onye ọrụ gọọmentị na-atụ aro mmiri ọgwụ antigen na Malaysia.
N'okpuru ọnọdụ na mgbochi ọrịa na Europe na-adịkarị "nkịtị", enwere ike iji ụdị nnwale nke nyocha nke antigen COVID-19 mee ihe na ebe obibi iji kwado nyocha onwe onye kwa ụbọchị site na ọha na eze, ma nwee ike ịme mgbakwunye dị mkpa Ndị ọrụ gọọmentị na-egbochi mgbochi ọrịa. Ọtụtụ ndị nrụpụta ụlọ IVD na-agbanwe ike ọrụ ha oge niile iji nye ụzọ ọrụ dị mkpa maka Europe na ụwa iji lụso ọrịa ahụ ọgụ.
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike ule nke onwe nke German
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike onwe onye nke NEWGENE France
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike onwe onye nke NEWGENE Belgium
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike onwe onye nke Sweden
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike onwe onye nke NEWGENE Denmark
Nseta ihuenyo nke akwụkwọ ikike onwe onye nke NEWGENE Czech